9 Rindrambaiko Adobe Maimaim-Poana Tanteraka tsy Misy Famandrihana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Rindrambaiko Adobe Maimaim-Poana an'ny 2022
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-01-09, Malagasy Blog
Ny fahazoana rindrambaiko Adobe maimaimpoana dia tsy dia sarotra loatra toa ny fahitana azy voalohany. Misy fomba mahomby maromaro hanaovana azy ara-dalàna. Jereo fa misy programa Adobe maimaim-poana sy fampiharana finday maimaim-poana izay mety tsy fantatrao taloha ary maimaim-poana tanteraka.
Top 9 Software & Apps Adobe maimaim-poana
Adobe Photoshop ho an'ny iPad - Miaraka amin'ny interface sensor
Photoshop Express - Ho an'ny fanitsiana loko fototra
Photoshop Mix - Ho an'ny retouching sary fototra
Lightroom Mobile CC - Fitaovana mandroso amin'ny fanitsiana loko
Adobe Premiere Rush - Fanovana horonan-tsary amin'ny finday avo lenta
Illustrator Draw - Fampiharana tsotsotra an'ny Illustrator
Adobe XD - Ho an'ny endrika UI / UX
Adobe Color - Ho an'ny asa miaraka amin'ny loko
Adobe Acrobat Reader - Ho an'ny asa amin'ny PDF
Rehefa mieritreritra momba ny vokatra Adobe ianao dia mety hieritreritra an-tsaina hoe: Photoshop CC, Lightroom CC ary Premiere Pro CC, sa tsy izany? Saingy ny orinasa dia manana fonosana rindrambaiko mahasoa maro hafa sy fampiharana tsy miankina azonao alaina maimaimpoana. Safidy tsara io ho an'ireo mpampiasa mpankafy na ireo izay efa nampiasa rindrambaiko hafa.
1. Adobe Photoshop ho an'ny iPad
Photoshop miaraka amina interface sensor
Mandrindra tsara amin'ny CC
Tonga lafatra ho an'ny famerenana sary
Tsy fahampian'ny RAW sy CMYK
Mifanaraka amin'ny iOS 13 ihany
Photoshop ho an'ny iPad
didim-pitsarana: Ity rindrambaiko Adobe maimaim-poana ity dia mety hampiasaina amin'ny fomba mahomby amin'ny famoahana sary amin'ny iPad-nao. Ny programa dia fikasana hanamboatra kinova Photoshop mahazatra ho an'ny iPad miaraka amina interface vaovao. Nahomby tamin'ny andrana sasany ny andrana.
Mbola afaka mankafy ny ampahany lehibe amin'ny fitantanana ny sosona ianao ary koa ny safidy mifangaro. Toy ny kinova desktop, Adobe Photoshop for iPad dia mamela anao hanova ny filaharana, ny anarana, ny haben'ny sosona, hamindra ary hanova azy ireo.
Mametraha modely opacity na blending, ary araraoty ny menio pop-up mode fampifangaroana miaraka amin'ny sary kely. Ny fampiasa farany dia vaovao ary tsy hita ao amin'ny kinova desktop. Raha tianao ny maodely maivana ao amin'ny tontonana sosona, azonao atao ny misafidy ny mampiseho sary kely fotsiny tsy misy anaran'ny sosona. Izany dia manampy amin'ny fampitomboana ny efijery, manome anao fidirana amin'ireo fiasa amin'ny alàlan'ny fihetsika.
Ho an'ny fanitsiana loko fototra
RAW, JPEG ary PNG dia manohana
Safidy fizarana betsaka
Fomba tena vitsy
Fampiasana tsotra amin'ny vidin'ny famoronana
Miserana amin'ny fitaovana Android
didim-pitsarana: Photoshop Express dia azo ampiasaina ho fampiharana irery na ilay antsoina hoe plug-in ho an'ny fakantsarinao. Azonao atao ny manokatra azy mivantana avy eo. Ity rindrambaiko maimaimpoana Adobe ity dia manohana rakitra RAW sy PNG, izay mahomby kokoa noho ny teti-bola hafa amin'ny Photoshop.
Mampiasa fitaovana sy fiasa azo ampiasaina, azonao atao ny mamboly, manodina ary mampiseho sary, manitsy ny fanodikodinana fomba fijery, manitsy ny fipoahana, ny fifanoherana, ny famirapiratan'ny aloka, ny aloka, ny feon'ny loko, ny mahavoky ary ny famirapiratana ho an'ny fizarana tsirairay amin'ny sary. Misy ihany koa ny Dehaze Tool matihanina.
Ny mampiavaka ity rindrambaiko Adobe maimaimpoana ity dia ny Text Tool. Photoshop Express dia manolotra endritsoratra 50 mahery, ny mety hanamboarana loko, fomba, habe ary mangarahara. Tsy afaka mamorona soratra mahafinaritra ho an'ny doka fotsiny ianao fa afaka manampy mari-drano koa.
Ho an'ny retouching sary fototra
Fitaovana matihanina maro
Miaraha miasa amin'ny Layers
Ny fitaovana sasany dia mila fanovana
didim-pitsarana: Ny Photoshop Mix dia antsoina hoe iray amin'ireo vokatra Adobe maimaim-poana tsy mieritreritra ny fahafaha-misintona maimaimpoana ny Adobe Photoshop. Manome anao fitaovana tsara hiara-miasa amin'ny sosona izy, satria io dia singa iray tena ilaina amin'ny fanovana sary. Amin'ny fampiasana Photoshop Mix, azonao atao ny manambatra sosona hatramin'ny dimy hamoronana sary sarotra, hifehezana ny fahamendrehana amin'ny alàlan'ny fomba fampifangaroana, ary hametrahana sivana maromaro amin'ny sosona maro. Afaka miasa tsy amin'ny rakitra RAW ihany ianao, fa amin'ny PSDs avy amin'ny Photoshop CC ihany koa.
Azonao atao ny mampiasa Photoshop Mix mba hanitsiana ny fipoahana, ny fifanoherana, ny mahasalama ary ny maranitra miaraka amin'ireo mpikorisa mahitsy sy ny topy maso mivantana. Azo atao koa ny mampiditra sivana sy vokany isan-karazany. Ny hafainganam-pandehan'ny asa fotsiny no olana. Noho ny fantsom-pifandraisana kely dia mety haharitra 3-5 minitra ny fanitsiana sary tokana.
Fitaovana mandroso amin'ny fanitsiana loko
Ampahany amin'ny fianakaviana Creative Cloud
Tsy ampy fanovana sary batch
didim-pitsarana: Lightroom CC mobile dia rindrambaiko Adobe maimaim-poana maimaimpoana ho an'ny mpaka sary amateur, izay te hanova sary fialan-tsasatra marobe na sary nalaina tamina finday smartphone / iPad. Ianao dia afaka mahazo Lightroom maimaim-poana, raha te hampiasa azy amin'ny biraonao na ny solosainao findainao ianao.
Samy hafa be ilay rindranasa amin'ilay kinova taloha: tapaka ny fampiasa, tsy misy fanodinana sary maro hafa, sns. Etsy ankilany, ny ankamaroan'ny fanaraha-maso manampy dia misy, ao anatin'izany ny fiasa toa ny fizarana tononkalo, ny fihenan'ny feo, ny fihenan'ny tabataba, ny sivana radial / gradient sns.
Ao amin'ny Adobe Lightroom Mobile CC, azonao atao ny manafoana ny fanovana rehetra ataonao amin'ny sary iray, na dia aorian'ny fanakatonana ny rindrambaiko sy hanokafana azy io aza na aorian'ny fanovana fitaovana aza - noho ny teknika fanovana sary tsy manimba. Ny kinova finday Lightroom dia manohana preset, azonao atao ny mamorona azy ireo amin'ny tanana na misintona avy amin'ny harato.
Fanovana horonan-tsary amin'ny finday avo lenta
Mora làlana mianatra
Fanaraha-maso feno ny horonan-tsary
Manohana ny fandraisam-peo am-peo
Indraindray dia tara
didim-pitsarana: Tsy toy ny fampiharana Adobe maimaim-poana, ny Premiere Rush dia manana curve mora ianarana, ary mety na dia ho an'ireo mpampiasa vao. Ny tonian-dahatsoratra dia manome ny fifehezana feno ny horonantsary, manolotra modely sary mihetsika ho an'ny mpampiasa, endri-peo ary fahafaha-miditra amin'ny tranomboky Creative Cloud sy Adobe Stock.
Raha miresaka momba ny fitaovana ianao dia afaka misambotra, manova ny filaharana, manitsy loko, manoratra ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny feo tsy lavitra, manampy lahatsoratra, voly, manitsy ny sivana loko ary maro hafa. Azonao atao ny mampiditra horonantsary 4 sy dian-peo telo. Azonao atao koa ny mamorona na mampiditra tetezamita mamorona, malama, na famoronana hafa.
Raha ny marina, raha te-hanova horonantsary amin'ny sehatra matihanina ianao dia tokony hividy Adobe Premiere amin'ny vidiny lafo na koa mahazo fihenam-bidy amin'ny Adobe!
Fampiharana tsotsotra an'ny Illustrator
Afaka mizara sanganasa amin'ireo mpampiasa hafa ianao
Fahaizana manao sary eo ambonin'ilay sary vita
Tsy manana fitaovana matihanina
Tsy afaka mamaky borosy efa vita ianao
didim-pitsarana: Adobe Illustrator Draw dia manana interface intuitive, tonga lafatra ho an'ireo mpanakanto finday vao manomboka. Ho fanampin'ireo endri-javatra lehibe, ity kinova maimaim-poana an'ny Adobe Illustrator mamela anao hijery ny asan'ireo mpitifitra sy mpanakanto hafa, mampiasa sy manombatombana azy ireo.
Misy karazany 6 ny borosy misy ao amin'ny mpanonta sary, izay azonao ampiasaina amin'ny fanaovana sary. Ny borosy tsirairay dia azo namboarina (habe, hamafin'ny, loko, mangarahara sns) arak'izay ilainao. Ankoatry ny borosy dia misy fitaovana mahaliana hafa, anisan'izany ny "Shape Lines". Ity fitaovana ity dia ahafahanao mamorona tsipika mahitsy tsara, ohatra, amin'ny kianja na telozoro.
Endri-javatra lehibe iray hafa an'ny fampiharana dia ny mamela anao hanao sary an-tampon'ny sary. Amin'ity endri-javatra ity dia afaka mamorona sary mahafinaritra amin'ny sarinao ianao.
Iray amin'ireo programa tsara indrindra ho an'ny endrika UI / UX
Manohana ny rafitra famolavolana be pitsiny
Afaka mamorona pikantsary vector na pixel ianao
Fitaovana mandroso sasany
Fitaovana famolavolana ratsy
Tsy misy fomba fiasa CSS
didim-pitsarana: Adobe XD dia ny fomba Adobe hifaninanana amin'ny fitaovana toy ny Sketch for Mac. Toy ny programa mitovy amin'izany, Adobe XD dia manohana ireo rafitra famolavolana mandroso sy famakiam-boky. Izy io koa dia manana fitaovana intuitive sy ny fahaizana mamorona prototypes interactive izay azo ampiasaina rehefa mizaha toetra ny mpampiasa raha tsy mila kaody.
Ny fampiharana dia ao anatin'ny fianakaviana Creative Cloud, ary izany dia manamora ny fizarana loharano. Azonao atao ny manangona fotsiny ireo singa famolavolana mahazatra anao ary mamindra azy ireo amin'ny rindrambaiko hafa.
Ity rindrambaiko Adobe maimaimpoana ity dia mitovy amin'ny Illustrator - ny fitaovana famolavolana dia mahazatra, na dia somary notsorina ihany aza. Saingy, ny tsy fisian'ny fanovana lahatsoratra dia somary manelingelina. Ohatra, tsy misy safidy ambanin-javatra - tokony hanaisotra lalan-dra ho an'ny tsipika tsirairay ilaina ianao.
Ho an'ireo izay matetika miasa amin'ny loko
Fitaovana fanampiny maro
Mitaky fifandraisana Internet milamina
didim-pitsarana: Ity no safidy tsara indrindra eo amin'ny vokatra Adobe maimaimpoana raha mila manatsara ny fandokoana ireo tetikasanao ianao. Ny fahitana ny loko tonga lafatra dia mety ho lahasa goavambe, satria mila mahatakatra sy manavaka ny loko, ny triatra ary ny lokony ianao.
Raha tsy retoucher / mpamorona matihanina ianao na te hampihena be ny fotoana lany amin'ny fanitsiana loko dia ampiasao fotsiny ny Adobe Color. Azonao atao ny misintona tanana ny kodiarana loko hamoronana loko vaovao, hijerena ny volon'olon-kafa, hamoronana fitambarana loko avy amin'ilay sary alaina, sns.
Satria samy hafa be ireo loko loko - ity no fampiharana tranonkala tsara indrindra ho an'ny mpamorona. Misy tetika an-jatony ara-bakiteny ao anatin'izany ny loko, ny toe-po, ny tonony ary ny halaliny rehetra. Raha mahita drafitra tianao ianao, dia azonao atao ny mametaka azy ary misafidy ny "Fampahalalana" hahitanao ilay kinova lehibe kokoa ary ahazoana angona fanampiny.
Ny rindrambaiko tsara indrindra hiasa amin'ny PDF
Fifanarahana tabbed intuitive
Fomba fanovana PDF mahitsy
Afaka mameno antontan-taratasy mora foana ianao ary mahazo sonia noho ny fizarana fizarana mirindra
didim-pitsarana: Adobe Acrobat Reader dia iray amin'ireo fitaovana mety sy mahomby indrindra hiasa amin'ny rakitra PDF. Ity rindrambaiko Adobe ity dia manolotra endri-javatra tsara hiara-miasa amin'ireo antontan-taratasy nomerika, hanova ny endriny, ary mamela ny mpampiasa maro hanova antontan-taratasy miaraka amin'izay aza.
Raha dinihina ny fiasa matanjaka, na ireo mpampiasa efa za-draharaha aza dia manana fanontaniana maro amin'ny alàlan'ny Adobe Acrobat.
Ahoana ny fomba ahazoana maimaim-poana ny vokatra Adobe rehetra
didim-pitsarana: Tsy ny fampiasana ireo programa voalaza etsy ambony ireo ihany no fomba ahazoana rindrambaiko Adobe Creative Cloud maimaimpoana. Mahafantatra iray hafa aho, tsy misy fomba mahomby kokoa, ny fomba ahazoana maimaimpoana ny vokatra Adobe - araraoty ny kinova andrana maimaimpoana.
Ity dia fomba tsara iray ho an'ireo, izay mbola mampiasa CS 2, ary tsy mahita antony hanatsarana ireo kinova lozisialy vaovao. Hatramin'ny nanombohana voalohany ny fitsapana ny Creative Cloud Free dia hanana 7 andro ianao hizaha toetra ny endrik'ireo mpanova sary rehetra, anisan'izany ny fitehirizan-drakitra sy ny Adobe Portfolio.
MAHAZAHA FANONTANIANA ADOBE
Aorian'ny famaranana ny fotoam-pitsapana dia afaka misafidy iray amin'ireo drafitra misy ianao ary manavao ny famandrihana anao na miverina amin'ny rindrambaiko Adobe 2 CS maimaimpoana. Aza adino fa afaka mahazo fihenam-bidy mahafinaritra amin'ny fisoratana anarana ianao.
Raha liana amin'ny rindrambaiko Adobe maimaim-poana ianao dia azonao atao ny misintona a Photoshop torrent, saingy indrisy, hiteraka olana maro izany, manomboka amin'ny malware eo amin'ny PC-nao ary miafara amin'ny olana ara-dalàna.
Bonus Freebies ho an'ny Adobe Software
Mampiasa programa Adobe maimaim-poana, azo antoka fa mila plug-ins isan-karazany ianao, na borosy ho an'ny Photoshop, preset ho an'ny Lightroom na ny overlay. Azonao atao ny misintona sy manandrana ireo safidy aseho etsy ambany maimaim-poana. Hotsorin'izy ireo tanteraka sy hanafainganana ny fivezivezenao.
Ity preset ity dia manampy voa kely amin'ny sary, izay hita indrindra amin'ny faritra maloka. Ny preset dia safidy mety indrindra amin'ny saripika na sary akaiky. mianatra ny fomba hanampiana preset amin'ny Lightroom.
2. Malalaka Lr Preset "Matte"
Ity plug-in LR maimaim-poana ity dia hanampy anao hanana vokatra Polaroid mahaliana amin'ny sarinao. Noho ny asa miaraka amin'ny curves sy ny loko, ary koa ny mainty mitombo, ny sary dia hahazo alokaloka matte tsara tarehy.
3. Malalaka Ps Action "HDR"
Ity hetsika ity dia hanampy harena sy tantara an-tsehatra amin'ny sary, izay matetika ilaina amin'ny sary lamaody. Mety ho an'ny tifitra izay misy antsipiriany kely amin'ny akanjo. Ny saripika akaiky ny lahy sy ny vavy dia ho hadino tokoa. Zahao ny fampahalalana momba ny fomba fametrahana ny hetsika Photoshop.
4. Malalaka Ps Font "Aquataken"
Ity dia iray amin'ireo endritsoratra matihanina tsara indrindra misy litera somary lavalava. Noho ny fahatsorany dia ampiasaina amin'ny haino aman-jery pirinty izy io.
5. Malalaka Pr LUT "Light Blue"
Raha mieritreritra ianao fa maizina sy tsy mahasarika ny horonan-tsarinao, io Teal sy Orange LUT io no tena ilainao. LUT dia tsara amin'ny fanomezana ny hoditra fijery manjavozavo ary manatsara ny loko manga amin'ny endriny nefa tsy mahavoky azy loatra. Ampiasao ity LUT ity ho an'ny sary-tsary.
Sintomy ny vokatra Adobe maimaim-poana amin'ny 1 Click
Mampiasà ADOBE CREATIVE CLOUD GRATIS
Misafidiana kinova fanandramana ary sintomy maimaimpoana ny rindrambaiko Adobe rehetra mba hitsapana sy hianarana momba ireo fiasa rehetra, ao anatin'izany ny fitehirizana rahona sy ny portfolio-Adobe. Aza misalasala mijery fa mendrika Solosaina rindrambaiko Adobe, izay afaka mifaninana amin'ny rindrambaiko voalohany.
Rindrambaiko Adobe maimaim-poana
Adobe Products rehetra maimaim-poana
Sintomy ny vokatra Adobe maimaim-poana